Ninkii Muslimka ahaa ee Ciraaq u dhashay ee reer galbeedka 1,000 sano uga horreeyay seynis ee noolaha - BBC News Somali
Buug uu Darwin qoray sanadkii 1859-kii ayuu ku qeexay aragtidiisa dhinaca seyniska ee abuurka noolaha, wuxuuna sheegay "inuu muuqaalka noolaha marba marka ka dambeysa isbaddalayay", isagoo faahfaahiyay sida ay u kala duwanaadeen nooleyaasha kasoo farcama hal noole.
Wuxuu xilligaas buug ka qoray sida uu muuqaalka noolaha isu baddalayay, habkaas oo uu ku magacaabay 'xulasho dabiici ah'.
Magaciisa dhabta ah wuxuu ahaa Abu Usman Amr Bahr Alkanani al-Basri, laakiin taariikhdu waxay ku xasuusataa naaneystiisii ahayd al-Jahiz, oo micnaheedu yahay qof ay indhihiisu u muuqdaan kuwo soo bixi raba.
Seynisyahan dalbaday in la dilo
Xigashada Sawirka, State of Qatar
Dalka Qadar waxaa astaamaha shaabadda ee warqadaha boostada lagu muujiyay sawirka al-Jahiz
Wuxuu magaalada Basra - oo ku taalla koonfurta Ciraaq - ku dhashay sanadku markuu ahaa AD776.
Xilligii uu dhashay waxay ahayd markii Ciraaq iyo meelaha u dhow dhow ay kasoo ifbaxeen fikrado loogu kuurgalayay cilmiga ku saabsan nolosha bani'aadanka.
Waxay ahayd markii uu heerka sare taagnaa xukunkii cabaasiyiinta. Erayo cilmiyeed oo laga soo turjumay luuqadda Giriigga ayaa laga dhigay Carabi, waxaana magaalada Basra ka billowday doodo waaweyn oo salka ku hayay dhinacyada diinta, seyniska iyo taariikhda.
Taasi waxay arrimo badan u bidhaamisay al-Jahiz, oo markii dambe la yimid fikrado isku toosan.
Xoogaa kadib Shiinaha ayaa ganacsiga warqadaha gaarsiiyay Ciraaq, waxayna arrintaas sii xoojisay sii faafinta fikradaha seyniska, al-Jahiz oo da' yaraana wuxuu durba billaabay inuu qoro mowduucyo kala duwan.
Waxyaabihii uu daneynayay waxaa ka mid ahaa culuumta seyniska, juqraafiga iyo naxwaha carabiga.
Waxaa la rumeysan yahay inuu soo saaray 200 oo buug intii uu noolaa, laakiin saddex meelood meel ka mid ah kaliya ayaa ka badbaaday buugaagtiisii, oo ilaa hadda nasoo gaaray.
"Xayawaannadu waxay dhibaato badan ka maraan sidii ay usii noolaan lahaayeen, gaar ahaan in ay ka badbaadaan inay xayawaanno kale cunto u noqdaan, sidoo kalena ay helaan wax ay quutaan," sidaas ayuu al-Jahiz ku qoray buuggiisa.
Waxaa kale oo uu ku yiri: "Arrimo dhinaca deegaanka la xiriira ayaa nooleyaasha u horseeda inay yeeshaan xeelado ay ku xaqiijinayaan sidii ay usii noolaan lahaayeen, kuwaasoo marka dambe waji kale usii yeelaya."
Wuu sii waday, oo wuxuu yiri, "Xayawananada ka badbaada in la cuno waxay guulo kasii gaaraan dabeecadaha iyo xeeladaha cusud ee ay ku yeeshaan duruufta awgeed."
Wargeys Faransiis ah ayaa Darwin kasoo xigtay fikrad ku saabsan in bani'aadanka iyo daanyeerrada ay kasoo farcameen hal awoowe
Fikradaha al-Jahiz waxay saameyn ku yeesheen seynisyahanno kale oo Muslimiin ah, kuwaasoo isaga ka dambeeyay.
Waxaa howsahiisii sii tixraacay seynisyahannada kala ah al-Farabi, al-Arabi, al-Biruni iyo Ibn Khaldun.
Wuxuu sheegay "in al-Jahiz uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee tooshka ku ifiyay xaqiiqda ku saabsan in bani'aadanka iyo nooleyaasha kale uu muuqaalkooda isu baddalo hadba sida ay isu baddalaan deegaannada ay ku nool yihiin".
Xaqiiqdii, seynisyahankii ay isku waqtiga noolaayeen Charles Darwin, ee isagana lagu magacaabi jiray William Draper, ayaa sanadkii 1878-kii ka hadlay "aragtida seyniska noolaha ee Mohammedan."